Ngathi | Jiangxi Royal Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Thina, Jiangxi Royal Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, uneminyaka engaphezu kwama-20 yamava kwiiFilling Stamping Hot, iHolographic Film, Iridescent / iDichroic Film, Iridescent / Dichroic Window Film, Iridescent PVC / TPU Film, Fine Chemicals njl.
SikwiNkqubo yeempendulo yeXesha nje (JIT) eqinisekisa ukuba imibuzo kunye neemfuno zakho ziya kuphendulwa ngaphandle kokulibaziseka, kukunceda ukuba uziqhelanise neemeko eziguqukayo zentengiso ngenkonzo efanelekileyo.
Ukusukela oko sasekwa, sithathe amanyathelo ongezelelweyo ukugcina inqanaba eliphezulu lomgangatho. Izatifikethi zinokubonelelwa ngokweemfuno zakho, ezinje nge-SGS, TST, FIKELELA, kwiNgxelo yoPhicotho lweFektri, sinezinto ezininzi kakhulu kunezidingo zakho.
Ukuthembela kwingqibelelo, inkonzo elungileyo kunye nokuyila, senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa umgangatho ophakamileyo kubathengi bethu. Kule minyaka yophuhliso, umthamo wamashishini ethu kunye nezibonelelo ziyakhula ngokuzinzileyo, kwaye iqela leengcali zorhwebo zamanye amazwe liqeqeshiwe. Siye saseka intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi abavela Asia, Melika naseYurophu. Ngapha koko, ingqalelo ekhethekileyo ikwahlawulwa kuphuhliso lwenkcubeko yeshishini. Yinjongo yethu ukukhula ukuba sibe yinkampani ephucukileyo yala maxesha.
Nxibelelana nathi ngoku! Cofa nje ukufumana umthengisi onokuthenjwa e-China kwaye ishishini lakho liya kuba lula kwaye ligude. Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nolwaneliseko lwakho. Akukaze kube semva kwexesha ukuqala ngoku ~
Ingqibelelo kuphela komgca wemigangatho yokuziphatha esiyibekayo, kwaye uxanduva loluntu luyimbopheleleko esifanele siyenze.
Ujoliso loMthengi- Ukoneliseka kwabathengi yeyona njongo iphambili yawo wonke umsebenzi wethu.
Ukusebenzisana- Siyazi kakuhle ukuba liqela elimanyeneyo, elinentsebenziswano, elithembanayo nelinentsebenziswano elinokunceda inkampani ukuba ikhule isempilweni.
Ubuchule-Ukuhlala uqhekeza isakhelo sendalo kungamandla okuqhuba ukugcina inkqubela phambili yenkampani. Ikwaluxanduva lwethu ukulandela imveliso egqibeleleyo kunye neenkqubo zokusebenza ezifanelekileyo.